Go'aaminta Khariidadda Adeegga - Geofumadas
Ogast, 2010 cadastre, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, qgis
Aniga oo ka faa'iideysanaya wadahadal dhowaan lala yeeshay hay'ad Cadastre ah oo raadineysay hab lagu daabaco khariidadeeda, halkan waxaan ku soo koobayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dib loogu soo celinayo badbaadinta mowduuca bulshada. Laga yaabee waqtigaas inay caawin doonto qof raba inuu go'aan gaaro ama weydiisto caawimaad geofumado.
Waa maxay sababta MapServer
Heerka wuxuu ahaa qof, kaas oo ujeedkiisu ahaa inuu ka tago Publisher, GeentWeb, Bentley, sababtoo ah wuxuu wali haystaa liisanka Server Discovery, awowgiis oo ah tan, dib ugu soo noqnoqon sanado boodh ah. Sabab kale oo ay u daneynayaan Bentley waa in khariidadahooda ay ku jiraan Microstation Geographics, oo leh codsiyada VBA ee dhismaha iyo dayactirka khariidadaha cadastarada.
Markii hore blogga (Dabeysha - Rare sida saaxiibku leeyahay) waxaan soo bandhignay sida loo abuuro adeegga khariidada webka, isticmaalka Manifold GIS, oo ah qiimo kale oo jaban. Waxaan sidoo kale maalin ka hadlay faa'iidooyinka ay leedahay Wargeyska Geoweb laga bilaabo Bentley xal ahaan marka lacag badani jirto. Tani waxay siineysaa sii wadida booskaas hore kaas oo Isbarbardhigyo ka mid ah codsiyada kala duwan ee daabacaadda khariidadaha online-ka.
Wadahadalka kadib waxaan go'aansanay inaan aadno MapServer, mowduuc aan rajeynayo inaan ka faa'iideysto maalmaha soo socda. By habka, bilaabi tijaabinta dhufto ee kale ee furan inta ka dhiman sanadka, laakiin jawiga webka.
MapServer maahan codsi GIS ah, xitaa iskama dhigeyso inuu yahay, sida boggeedu leeyahay. Waxay ku dhalatay sidii hindisaha Jaamacadda Minnesota, haddaba sumadeedu waxay ka timaaddaa isku-xidhka wabiyada Minnesota iyo Mississippi. Maanta waa halbeeg lagu cabbiro adeegga khariidadda websaydhka ee sida ballaaran loo qaybiyey, laga yaabee inay ku timid asal ahaan Anglo-Saxon. Maaddaama codsigan ay jiraan tiro ballaadhan -aad u ballaaran oo aad u ballaaran,, Waan jeclahay fududahay, ugu fudud ee dadka cusub; Dhammaan sixirku wuxuu ku jiraa faylka faylka .map kaas oo laga soo saari karo barnaamijyada sida QGis ama fahmayo caqligalka ah khariidadaha loo adeegsado sida luuqadaha sida PHP, Java, Perl, Python, Ruby ama C #.
Codsiyo badan ayaa lagu sameeyaa MapServer "adeegaySida Chamaleon, Cartoweb, Ka-map, iyo Pmapper. Kuwani waxaa lagula talinayaa dadka isticmaala ee leh aqoon yar code, in kasta oo fahamka caqliga aasaasiga ah ee MapServer uu yahay mid ku habboon.
Tusaalaha la muujiyay ayaa ah, kaliya tusaale shaqada aan hada qabaneyno. Oggolaanshahooda iyo ka warqabkooda in adeeggan ay dadweynaha u heli doonaan toddobaadyo ka dib markaas ayay arki karaan iyagoo shaqeynaya.
Waa maxay arjiyada kale ee websaydhka jira
Tani, waxaan u isticmaali doonaa tixraaca aasaasiga ah OSGeo, taas oo ah mid ka mid ah hal-abuurka ugu hal abuurka badan marka la eego joogtaynta iyo dejinta ilaha furan ee geospatial. In kasta oo aan qirayo inay jiraan kuwa kale.
Mapbuilder, kaas oo gaaray dhammaadka nuqulka 1.5 oo ku midoobay Layers Open. Sheygii AJAX… wuxuu ahaa qurux.
Lakab furan, yaabab haddii aad rabto inaad isku xirto Google ama Yahoo Khariidadaha ama si hufan u xajiya muuqaalka raajada.
Mapguide Opensource, oo caan ku ah xiriirka ay la leedahay AutoDesk. Adag inaad u dhimato, dhadhan kasta oo aad rabto.
Degree, waa qiiq heerarka ah. Iyada oo leh awood badan oo Yurub ah. Xasiloonida ay ku leedahay taageerada GML awgeed, waxaa loo soo jeediyay inay tahay bedel dhexdhexaad ah oo loogu talagalay hirgelinta geeddi-socodka webka ee dadaalka. INSPIRE.
Xalalka kale ee OSGeo waa:
Geoserver, awoodda ugu weyn ee uu leeyahay waa horumarinta ku saabsan Java. Iyada oo wax badan oo ay ku bixiyaan sida Laydhka Furan marka la dhexgelinayo Khariidadaha Google, Google Earth, Khariidadaha Yahoo, oo ay ku jiraan ArcGIS.
Geomatics oo ay ku jiraan macaamiisha fudud, mashiinka iyo webka.
MapFish, iyada oo diiradda saareysa Pyton laakiin laga yaabo in mid ka mid ah ugu yaraan la diiwaangeliyay (online).
U hoggaansanaanta oo leh heerar OGC. Waxaa laga yaabaa in ugu fiican, inkasta oo ku dhowaad dhammaan codsiyada keli ah ee furan yihiin, ugu yaraan marka la eego WMS, WFS, WCS, GML.
Adeegga Khariidadda Webka (OGC: WMS) 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0 iyo 1.1.1
Adeegga Muuqaalka Webka (OGC: WFS) 1.0.0, 1.1.0
Adeegga Kaalmada Bogga (OGC: WCS) 1.0.0, 1.1.0
Juqraafi Luqad Juquraafi (OGC: GML) 2.1.2, 3.1.0 Heerka 0 Heerka
Dukumiintiga Mawduuca Shabakadda ee Shabakadda (OGC: WMC) 1.0.0, 1.1.0
Tusaaleyaha Layli Layla (OGC: SLD) 1.0.0
Qalabka Farsamaynta Calaamadaha (OGC: FES) 1.0.0
Adeegga Qalabka Indhaha (OGC: SOS) 1.0.0
Indhaha iyo Cabbiraadyada (OGC: OM) 1.0.0
Ku adeegida xogta iyadoo la raacayo tilmaamaha Open Gis Consortium ayaa ka dhigi doonta barnaamij kasta inuu ku dheganaado iyada oo aan caqabad badan la helin. Laga soo bilaabo AutoDesk Civil3D, ArcGIS. Khariidadda Bentley, illaa gvSIG, QGis, iwm. Xitaa Google Earth / khariidadaha adoo adeegsanaya wms.
Isbarbar dhigista codsiyada aan hore u soo shaqeeyay (GeoWeb Publisher iyo Manifold GIS), MapServer ayaa dhaaftay iyaga farqi badanNatiija ahaan, boggaagu wuxuu hayaa macluumaad ku filan, tusaalooyin horumarsan, oo aan lagu xusin bulshada isticmaala. Marka laga hadlayo GWP waa inaad wax badan ka shaqeysaa cidiyahaaga iyo waxa jira Manifold ee Isbaanishka waa wax aad u yar -baxayo Waxaad egeomates si looga fogaado khilaafka-.
El taageerada xogta waa yaabe. Jannada ma aha laakiin way ku dhowdahay:
Xogta Vector ama Geodatabase: Faylasha qaabeed, GML, PostGIS iyo hal adduun oo dheeri ah oo loo maro OGR, oo ay ku jiraan DGN.
Xogta Raster: Tifaftirka guud iyo wixii aan dooneyno ee loo maro GDAL.
Natiijada, waxaad soo saari kartaa jpg, png, pdf iyo dabcan, heerka OGC.
Markaas waxaa jira taageerada multiplatform. MapServer wuxuu ku shaqeyn karaa korka IIS, taas oo ka dhigeysa mid saaxiibtinimo u leh isticmaaleyaasha Windows / PC. Sidoo kale Apache, oo ay ku shaqeyn karto Windows iyo Linux si la yaab leh, maahan oo kaliya inay u adeegto xogta laakiin si ay u socoto. Xagga Manifol
d, kaliya daabacaadda IIS, haddii aad u sheegto Apache soo qaado, inkastoo qaar ka mid ah ay sameeyeen budhcad-badeeda. Marka laga hadlayo Bentley, kaliya Windows, xitaa muujinta webka waa ActiveX oo ku shaqeysa kaliya Internet Explorer, ilaa laga cabo mooyee. IDPR si aad u sarreeya ee kartridda booska.
Uma baahnid in la yiraahdo, taasi ma'aha bixinta shatiga. Ruqsadda Manifold Universal waxay noqonaysaa $ 600, oo ah tan Bentley GWPublisher oo ah US $ 10,000 oo adeegsadayaal xadidan leh iyo haddii ay ahaan lahayd GIS Server oo ah US $ 15,000 kor.
Ugu dambeyntii, waxaan arkayaa faa'iido weyn horumarka. Raadinta qof shaqeeya MapServer ma sahlana, laakiin way ka fududdahay barnaamijyada kale, xitaa meel fog sida aan hadda sameyno. Horumar sameeye garanaya caloosha Bentley GWPublisher ma sahlana in la helo, waa inuu ogaadaa Project Wise, Geographics, Microstation VBA iyo Bentley Map si looga faa'iideysto horumar xoog leh oo ka socda Bentley Geospatial Server (Inkasta oo aan qirsanahay in waxyaabo cajiib ah oo halkaa lagu sameeyo). Soo-saare Manifold GIS ah, aad u adag inkasta oo uu yahay oo kaliya .NET, iyo mid ka socda GIS Server, ayaa hubaal laga qaadi doonaa iyadoo kuxiran inta leysinka u qalmo.
Sida loo dhejiyo tallaabooyinka 5
Ma jiraan tallaabooyin badan, iyo bilowgii Bilowgii:
Soo rog OSGEO4W halkan
Ku rakib, ugu yaraan MapServer, Apache iyo tusaale.
Ku rakib Apache oo sameyso adeegga (ama kor u qaado buugga adiga oo adeegsanaya IIS).
Tusaale ku samee shabakada
Haa, sida genesis, inta u dhexeysa aayadaha 1 iyo 2 waxaa jira dhowr waxyaalood oo ka dhacay fallaagada Shaydaanka. Guud ahaan helitaanka adeegga midkood iyada oo loo marayo http: // localhost / ama aad ku mashquulsan tahay dagaalkaaga, laakiin waad baraneysaa.
Waxay noqon doontaa midka xigta ee aan ku sharaxi doono.
Post Previous" Hore Miyaanu qabannaa xarun dhan robot?
Post Next Talooyin: Sida loo bilaabo Qorista QodobkaNext »
7 Jawaab ah "Go'aanka Khariidada Adeegga"
Hi Eulises. Maalin maalmaha ka mid ah ayaad noo sheegi doontaa qiiqa aad ku sameysay C #, waxa aan ku arkay wax aad u yar oo websaydh ah.
Maxaad u sameysatid c + s server ah 2008 ama horey ujiray iyo daabacaya qaabka nooca nooca noocan ah iyo sidaas awgeed waxaad ka fogaaneysaa su'aasha domain iyo markaa kaliya waxaad eegtaa server oo leh asp.net
Ignacio isagu wuxuu leeyahay:
khibrad kasta oo leh isha furan Mapguide ?? Muddo dheer ayaan rakibayay, laakiin markaan bilaabayo sayidkaygu wuxuu igu tuurayaa cilad isku xirka serverka ... barashada af Isbaanishka ayaa waxtar badan yeelan doonta.
Nasiib darro, waa inaad la dagaalanto mashiinka raadinta Google.
Hello, aad ayaan u xiiseynayaa khariidadaha, qaar ka mid ah waxyaabaha aan fursad u helay in aan isu keeno, waqtigan xaadirka ah waxaan u go'anahay samaynta dalab khariidad ku jirta gudaha saldhigyada, ma leedahay fikrad ah sidee? ama waxoogaa caawimo ah .. Waxaad ku mahadsan tahay wax badan
Waa inaad raadisaa shirkad bixisa khariidado khariidado ku jira adeegga.
iyo sidoo kale http://www.hostgis.com/
Si aad ugu adeegto heerarka intranet waa wax sahlan, sababtoo ah oo kaliya IP-ga mashiinka adeegga kor u qaada (iyo sidoo kale 192.168.0.129) ayaa ka heli kara kombiyuutarada kale ee isku shabahada ama koox kale.
Haddii aad rabto inaad ugu adeegto internetka, ka taxaddar in mashiinka u shaqeynaya sida server uu leeyahay xiriir internet oo aad u fiican ama ka yar, iyo IP dadweynaha sidoo kale loo adeegsado (80.26.128.194). Sababta ayaa ah IP-ga ay qalabku qaadanayaan marka lagu xirayo internetka, oo ay bixiso adeegga Internetka, inkasta oo ay tahay mid dadweyne, isbeddelo markasta oo la galayo oo la go'an yahay, marka waa inaad bixisaa.
Haddii aadan rabin helitaanka lambarka IP sida kan hore, waxaad bixineysaa adeega domainka iyo DNS, oo aad adigu leedahay cinwaan fudud http://www.eldominio.com. Waxaad sidoo kale ku laaban kartaa qaybta hoosaadka ama adeegyada bixiya bogag sida http://www.no-ip.com
Martiño Cabana isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo ayaan u dirayaa blog-ka oo aan wax ka qabanayey wakhti hadda. Inkastoo aan ahay khabiir nafleyda ah, waxaan ka shaqeynayaa arrimaha GIS. Sannadkii hore waxaan bartay inaan isticmaalo MapServer xoogaa waana mid aad u wanaagsan. Laakiin waxaan qabaa su'aal ah inaanan weli helin jawaabta. Shirkadda martigelinta waxay leedahay dukaanka MapServer? Natiijo noocee ah ayaad leedahay inaad isticmaasho kombiyuutarkaaga oo aad isticmaasho shabakadda internetka ee gudaha ah?
Waxaan jeclaan lahaa in aan sameeyo mashruuc kale mashruucan, laakiin ma haysto wax aan ku xiro shabakadda.
Haddii qof ogaado jawaabta, waxaa si fiican loo heli doonaa.